Ungawakha Kanjani Umkhiqizo Wakho Ku-inthanethi | Martech Zone
NgeSonto, Novemba 18, 2012 Douglas Karr
Sivame ukungena okhuleni kwesinye isikhathi njengoba sibloga mayelana nobuchwepheshe obuthile bokukhangisa ngamasu. Kusekhona ithani lezinkampani laphaya elingakhelanga ubukhona bewebhu obanele ukuqala ukuthola ukuhola noma ukuguqulwa online. Le yi-infographic eqinile yokuthi ungawakha kanjani umkhiqizo wakho online.
Namuhla, amabhizinisi kumele asungule ubukhona obunamandla ku-inthanethi ukuze ahehe amakhasimende aseduze nakude. Iwebhusayithi idala ukuxhumana namakhasimende ngokusungula ukwethembeka ngokwazisa ngomkhiqizo. Amawebhusayithi avumela amabhizinisi ukuthi abeke yonke imininingwane yawo endaweni eyodwa, okwenza kube lula kumakhasimende ukuthi axhumane nemikhiqizo noma nezinsizakalo zakho. Kusuka ku-Freewebsite.com infographic Ungawakha Kanjani Umkhiqizo Wakho Ku-inthanethi
Ukhiye we-infographic ingxoxo yegama brand. Igama liguquke kubalimi abafaka uphawu izinkomo zabo, kepha selivele lavela ngaphezu kwegama, ilogo noma isiqubulo njengoba sibheka imikhiqizo online. Manje uphawu lufanekisela ubuntu obuku-inthanethi obuthuthukiswe yinkampani, obufaka igunya layo, ukwethembeka nobuntu. Konke okwenziwa yinkampani ku-inthanethi kuyanezela kulowo muntu, futhi kufanele kugcinwe futhi kuphathwe.
Tags: brandisu lokubeka uphawuindlelaungawakha kanjani umkhiqizo wakhoungawakha kanjani umkhiqizo wakho onlineukumaketha onlineIngqungquthela Yokumaketha eku-inthanethi
Nov 30, 2012 ngo-1: 41 AM
Ukwenza uphawu ku-inthanethi kungumthelela omkhulu ebhizinisini eliku-inthanethi ukuze livikeleke kumakhasimende. Kungakho isu elihle lokumaketha libaluleke kakhulu.